RASMI: Waqtiga la ciyaarayo kulanka El Clasico oo maanta la go’aamiyay – Gool FM
(Madrid) 13 Nof 2019. Waxaa maanta la go’aamiyay waqtiga la baasanayo kulanka El Clasico ee dhax mari doono Barcelona iyo Real Madrid.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa ku kulmi doono garoonka Camp Nou, kulankoodii ugu horreeyay El Clasico ee xilli ciyaareedkan 2019/20, 18-ka December sida la xaqiijiyay maanta oo Arbaco ah.
Kulanka labadan kooxood ayaa horey u qorsheysnaa inuu dhaco 26-kii bisha October ee la soo dhaafay, kahor inta uusan maamulka La Liga dib u dhigin sababa la xiriira rabshado siyaasadeed ee ka jiray gobolka Catalonia.
Arrinta ugu weyn ayaa waxay aheyd dibadbaxyo ballaaran ee ka jiray gobolka Catalunya, kaddib markii la xiray sagaal xubnood oo sarsare ee ka tirsanaa ragii u olaleenayay gooni u goosadka gobolka Catalunya.
Banaanbaxyadan ayaa sarre u qaaday walwalka amni kahor imaatinka Madrid ee Camp Nou bishii lasoo dhaafay, iyadoo xiriirka kubadda cagta Spain uu ugu dambeyntii go’aansaday in la badelo taariikhda la ciyaarayo kulanka El Clasico.
Maamulka horyaalka La Liga ayaa ugu dambeyntii maanta go’aamiyay in kulankaas la ciyaaro Arbaco 18-ka December, marka ay sacada Spain tahay in la baasto 8:00pm CET.